Isbedalku waa inuu ka billaabmaa la xisaabtanka madaxda Amniga! - WardheerNews
Isbedalku waa inuu ka billaabmaa la xisaabtanka madaxda Amniga!
Muqdisho (WDN)- Maxay tahay sababta ilaa hadda Dowladda Farmaajo aynan u samayn isbadel muuqda oo ku aadan mas’uuliyiinta howlaha Amnniga, kuwaasi oo ku fashilmay sugidda nabadda iyo ka hortaga qaraxyada Muqdisho?
Sanbalooshe (bidix), Islow iyo Saacid
Soomaaliya oo guud ahaan ay ka jirto dhibaatooyin la xidhiidha xaga ammaanka, ayaa qaraxii ka dhacay Muqdisho bishan Oktoober 14, uu ahaa masiibo Qaran, oo ay ku dhinteen ama ku dhawaacmeen dad ku dhow ama kor u dhaafay 1,000 qof.
Haddaba waxaa iyana ah arin aan u cuntami karin shacbiga Soomaaliyeed, ilaa iyo hadda in DFS, aysan wax talaabo ama la xisaaban ah ka qaadin (accountability), mas’uuliyiinta howlaha Amniiga sida:
Taliyaha ciidanka Boooliska iyo kuwo kaleeto ee loo igmaday hawllaha sugidda Amniga dalka, gaar ahaan Muqdisho.
Haddii Madaxweyne Famaajo uunan la iman qoshe guud oo dhinaca ammaanka (complete overhaul of security sector), oo ka reeban laab-lakac caadifadaysan, islamarkaana hoggaanka Amniga aan loo igman dad karti iyo aqoon u leh, Soomaaiya xaaladeedu waxa ay noqonaysaa mid madow oo ka sii darta.
Waxaan rajaynaynaa in Dowladda Federaalku ay isbadal dhaksi ah samayso, oo ka bilaabmaya shaqo ka saarista dhamaan madaxda Amniga ay ku dhaqaaqdo.